Sababaha Guud ee Isdhaafsiga OST Fayl Musuqmaasuq
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Sababaha Guud ee Isdhaafsiga OST Fayl Musuqmaasuq
Sababaha Caadiga Ahaa Ha Isweydaarsado Microsoft OST Diiwaan geli Musuqmaasuq ama Waxyeello
Waxaa jira sababo badan oo kaa dhigi doona adiga Beddel galka khad la'aanta (.ost) faylka kharribmay ama dhaawacmay. Waxaan u kala saaraynaa laba qaybood, tusaale, sababaha qalabka iyo sababaha softiweerka.
Mar kasta oo qalabkaagu ku guuldareysto keydinta ama wareejinta xogta Isweydaarsigaaga OST faylasha, ka OST faylasha waxay u badan tahay inay xumaadaan. Inta badan waxaa jira saddex nooc:
Ka Fashilka Qalabka Kaydinta Xogta. Tusaale ahaan, haddii disk-kaaga adag uu leeyahay qaybo xun iyo is-weydaarsigaaga OST faylka ayaa lagu keydiyaa qeybahan. Markaas waxaa laga yaabaa inaad kaliya akhrin karto qayb ka mid ah OST faylka. Ama xogta aad aqrisay waa khalad oo qaladaad buuxa ayaa kajira.
Fashilida Xiriirka Isku-xirka . Markaad iswaafajineyso OST faylka ku xareyso serverka isku xirka shabakada, haddii kaararka isku xirnaanta shabakada, cables, router, rugs iyo qalab kasta oo kale oo sameeya isku xirka shabakada ayaa leh dhibaatooyin, markaa howsha iswaafajinta waa la soo ridi doonaa OST faylka ayay u badan tahay inuu kharribmo
Fashilka Awooda. Haddii cilad koronto dhacdo marka aad marin u helayso ama aad isku OST faylasha, taas ayaa ka tagi karta OST faylasha waxyeeloobay
Waxaa jira farsamooyin badan oo looga hortago ama loo yareeyo OST Musuqmaasuqa faylka sababo la xiriira dhibaatooyinka qalabka, tusaale ahaan, UPS waxay yareyn kartaa dhibaatooyinka cillad la'aanta xagga korontada, shabakadda xad-dhaafka ah waxay yareyn kartaa dhibaatooyinka shabakadda, adeegsiga aaladaha qalabka lagu kalsoon yahay waxay sidoo kale yareyn kartaa fursadaha musuqmaasuqa xogta.
Sidoo kale isweydaarsi badan OST Musuqmaasuqa faylka ayaa dhacaya sababo la xiriira arrimaha software-ka.
Soo Celinta Nidaamka Faylka aan Sax ahayn Waxaad u arki kartaa inay tahay wax aan la rumaysan karin in soo kabashada nidaamka faylka ay sababi karto OST musuqmaasuqa faylka. Laakiin xaqiiqda, mararka qaarkood marka nidaamka faylkaaga la jajabiyo, oo aad isku daydo inaad shaqaaleeysid qalab kabashada xogta ama khabiir ku soo kabsada OST faylasha ku yaal, faylasha la soo helay wali way musuqmaasuqayaan, maxaa yeelay:
Musiibada nidaamka faylka awgeed, qaybo ka mid ah asalka OST faylka waa lost si joogto ah, ama dib loogu qoro xogta qashinka, taas oo ka dhigaysa kan ugu dambeeya ee la badbaadin doono OST faylka aan dhammaystirnayn ama ku jira xog qaldan.
Qalabka soo kabashada ama khabiirka ma leh khibrad ku filan oo isaga / isagu laga yaabo inuu ururiyo qaar ka mid ah xogta qashinka oo u kaydiyo sida faylka leh.OST kordhinta. Sida kuwaan loogu yeero.OST faylasha kuma jiraan wax xog ah oo sax ah oo ku saabsan faylasha galka isku-beddelka khadka tooska ah, gabi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn.
Qalabka soo kabashada ama khabiirka ayaa soo aruuriyay xogta saxda ah ee loogu talagalay OST faylka, laakiin kuma uusan darin iyaga nidaam sax ah, taas oo sidoo kale ka dhigaysa kan ugu dambeeya ee la badbaadinayo OST faylka aan la isticmaali karin
Sidaa darteed, markay masiibo nidaam fayl dhacdo, waa inaad heshaa qalab kabashada xogta wanaagsan / khabiir ku soo ceshan kara OST faylasha Qalab / khabiir xun ayaa xaalada ka sii dari doona halkii laga fiicnaan lahaa.
Virus ama Software kale oo xaasidnimo ah. Fayrasyo ​​badan ayaa sumoobi doona oo dhaawici doona Isdhaafsiga OST faylasha ama ka dhig meel aan la geli karin. Waxaa si aad ah loogu talinayaa in lagu rakibo software anti-virus tayo leh nidaamka emaylkaaga Muuqaalka iyo Sarrifka.
Jooji Muuqaalka aan caadiga ahayn. Xaaladda caadiga ah, waa inaad si qurux badan uga tagtaa Muuqaalka adigoo kaydinaya dhammaan isbeddeladaada OST faylka kadibna dhagsii sheyga "Exit" ama "Close". Si kastaba ha noqotee, haddii Muuqaalka si aan caadi ahayn loo xiro markaad furayso, marin u heleyso ama aad waafajineyso OST faylka, ka dibna ah OST faylka ayaa u nugul in la musuqmaasuqo ama la waxyeeleeyo. Tani waxay dhici kartaa haddii awood darrida aan kor ku soo sheegnay ay dhacdo, ama haddii Muuqaalka Muuqaalka uu ku mashquulsan yahay wax qabashada oo aad joojiso adigoo gujinaya "End Task" ee Windows Task Manager, ama haddii aad damiso kombuyuutarka adigoon ka bixin Outlook iyo Windows sida caadiga ah.
Khalad iswaafajinta. Iswaafajinta udhaxeysa faylalka qadla'aanta iyo adeegaha sidoo kale waxay horseedi karaan khaladaad badan, oo ay kujiraan tiro badan oo ah waxyaabaha isku dhaca, ma furi karo waxyaabaha gaarka ah ee Muuqaalka, iwm.
Ciladaha ku jira barnaamijyada Muuqaalka. Barnaamij kasta wuxuu leeyahay cillado, sidoo kale Muuqaalka. Khaladaadka qaarkood waxay ka yimaadaan aragtida gaaban ee naqshadeeyayaasha. Badanaa waa la filan karaa laakiin ma yeeli karno lagu xallin karaa si fudud hagaajinno ama balastarro. Tusaale ahaan, maalmaha hore, naqshadeeyayaasha Microsoft ma rumaysna inay xog badan ku jiri doonaan OST faylasha, sidaa darteed cabirka ugu badan ee OST Faylka ka baaraandegi kara Outlook 97 ilaa 2002 waa 2GB naqshad ahaan. Laakiin maalmahan, isgaarsiinta iyo macluumaadka shaqsiyeed si dhakhso leh ayey u koraan OST faylku si aad ah ayuu u kordhayaa. Marka OST feylal ku dhowaad ama dhaafsiisan 2GB, wuu xumaanayaa. Halka cilladaha kale ay ka dhashaan taxaddar la'aanta barnaamijka. Guud ahaan, lama filan karo laakiin markii la helo, waxaa lagu xallin karaa hagaajin yaryar ama dhejisyo. Tusaale ahaan, marka Muuqaalka uu la kulmo qalad lama filaan ah, wuxuu oran doonaa “Microsoft Outlook ayaa la kulantay dhibaato waxayna u baahan tahay inay xirto. Waan ka xunahay dhibaatada.”Oo joojiya si aan caadi ahayn, taas oo ay u badan tahay inay sameyso OST faylka kharribmay
Astaamaha Musuqmaasuqa OST files:
Tixraac ahaan, waxaan ururinay liiska khaladaadka iyo dhibaatooyinka guud ee Isweydaarsiga OST file, oo ay ku jiraan astaamaha iyo sharaxaad faahfaahsan markay a OST faylku wuu kharribmaa
Hagaaji Musuqmaasuqa OST files:
Waxaad isticmaali kartaa badeecadeena abaalmarinta ku guuleysatay DataNumen Exchange Recovery ilaa soo kabso Musuqmaasuqii kaa dhacay OST files.